1 taona 11 volana lasa izay #365 by Mathew3120
Te hametraka fanontaniana momba ny installers, rehefa ry zalahy ny installers vaovao farany ho an'ny addons.Will installers taloha mbola ho afaka télécharger addons na no tsy maintsy misintona ny Adaona indray ny vaovao installer.
1 taona 11 volana lasa izay #366 by rikoooo
Tsy maintsy alaina ny Adaona indray, vaovao installers dia vonona ho farany P3D sy FSX Steam, manomboka amin'ny dikan-installer 10.
1 taona 11 volana lasa izay #374 by rufgar
Hi. Vao haingana aho no alaina pilatus PC-9 avy amin'ny fivarotana sy ny toerana misy anao toerana fampirimana dia voafetra mba fsx fa tsy fsx-etona. I kopia ary napetany ny fsx-etona ary miasa tsara afa-tsy ny gauges. Misy noho izany, na damba Aho no Mila misintona indray? Misaotra.
1 taona 11 volana lasa izay #376 by Gh0stRider203
rufgar nanoratra hoe: Hi. Vao haingana aho no alaina pilatus PC-9 avy amin'ny fivarotana sy ny toerana misy anao toerana fampirimana dia voafetra mba fsx fa tsy fsx-etona. I kopia ary napetany ny fsx-etona ary miasa tsara afa-tsy ny gauges. Misy noho izany, na damba Aho no Mila misintona indray? Misaotra.
toy izany koa ny gauges tsy hametraka, dia izay tena hoe? Te-ho azo antoka fotsiny izahay eo amin'ny pejy ihany alohan'ny manomboka milaza zavatra
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: rufgar
1 taona 11 volana lasa izay #377 by rufgar
Eny cockpits misy any fa tsy miasa gauges.
1 taona 11 volana lasa izay #378 by Gh0stRider203
tsara, raha mandeha aho Gold Edition, avy izay mahalala raha tsy hametraka ao amin'ny lahatahiry hafa noho ny Steam, fa ny saiko kosa tsy mahazo Rehefa any amin'ny FSX Directory amin'ny etona, dia tsy miova ny zavatra rehetra (Ahy Ahitsio, azafady, raha ' M ratsy).
Tokony ho afaka fotsiny hametraka izany toy ny ara-dalàna, dia hifindra fotsiny ny zava-drehetra ho amin'ny tokony lahatahiry. Mihevitra aho izao no nataonao?
Ianao no hamela Ahy LOL Tsy mbola nampiasa FSX Steam Edition LOL Fantatr'Andriamanitra ve raha tsy maintsy mahazo izany, dia ho Mpanjaka Sady iany fanaintainana eo amin'ny ahem fantatrao rehetra ny ... ahhh zavatra aho lmao I mean..My FSX fampirimana ihany erm 67.2 Gigs .... LOL
1 taona 11 volana lasa izay #379 by rufgar
Tsy afaka mametraka mivantana fsx-etona. Tsy maintsy azo adika avy fsx. Midika izany misaraka gauges config tsy maintsy noforonina ho azy ireo hiasa. Tsy misy ny gauges avy fsx asa amin'ny etona.
1 taona 11 volana lasa izay #380 by rufgar
1 taona 11 volana lasa izay #381 by Gh0stRider203
Tsy tokony (amin'ny kely indrindra amin'ny teoria) ho gauges fampirimana ao amin'ny etona Version ....
Lemme mahazo mihazona ny sasany buddies, angamba izy ireo dia afaka manampy tsara kokoa noho ny Me
1 taona 11 volana lasa izay #382 by rufgar
Misaotra vady be mankasitraka
Fotoana mamorona pejy: 0.306 segondra